Aikwana & Chairs - China Gormeet Plastic
Ridzai Kuumbwa kwacho vaivawo zvikuru kushandisa pazvigaro pakuburitsa, zvigadzirwa vakanga nemakemikari pakusimba, acid, Anti-kunofambira mberi, kutonhora & nokupisa nemishonga, ruvara kudzikama, nyore kuisa uye kushandisa. Kune kazhinji marudzi maviri zvinhu zvedu: mwana motokari nezvigaro, zvakafanana kushandiswa chair. Baby motokari zvigaro, booster nezvigaro Pasinei nokuti pfupi nzendo kana yenzendo refu, motokari zvigaro kunokosha zvinhu vana, mwana kuchengeteka zvigaro vaionekwa kuti imwe yenzira kudzivisa vana pakarepo zvinokuvadza ...
Ridzai Kuumbwa kwacho vaivawo zvikuru kushandisa pazvigaro pakuburitsa, zvigadzirwa vakanga nemakemikari pakusimba, acid, Anti-kunofambira mberi, kutonhora & nokupisa nemishonga, ruvara kudzikama, nyore kuisa uye kushandisa.
Kune kazhinji marudzi maviri zvinhu zvedu: mwana motokari nezvigaro, zvakafanana kushandiswa chair.
Baby motokari zvigaro, booster zvigaro
Kana kuti pfupi nzendo kana yenzendo refu, motokari zvigaro kunokosha zvinhu vana, mwana kuchengeteka zvigaro vaionekwa kuti imwe yenzira kudzivisa vana pakarepo zvinokuvadza ari tsaona dzemotokari.
Tinopa motokari nezvigaro kwemakore ose, kubva achangoberekwa motokari zvigaro kuti booster zvigaro rakagadzirirwa vana vakura.
· Made yepakutanga HDPE
Dzakafanana ukobvu uye simba crashworthiness
Svikiro yakakwirira samolecular, pamwe tsime zvazvinoita nemishonga
Anogona kubereka purasitiki puranga chete, kana vakaungana zvose kumativi yokuumba rakapera zvigadzirwa.
We gadzirisa cheya mamiriro maererano basa unofanira, ndivaite dzisiri akaremara kuti chakakodzera mamwe chikamu zvigadzirwa Somuenzaniso, handrails, backrests uye zvichingodaro. muitiro yedu kunyatsotaura kudzora kukura panguva kugadzirwa mukati zvinobvumidzwa tolerances, uye nguva dzose zvakanaka kudzora mavara pakati batch siyana.
Chairs zvinogona textured hukawanika & dzakasiyana maumbirwo, makuriro, mavara & kuoma.
Zvinhu kusanganisira asi hakungoitwi:
Services kusanganisira asi hakungoitwi:
· Mould pakugadzira
· Kuzadzika ebetsero remapazi
· Purchase pamusoro subcomponents
· Assembly uye kavha
· Direct kutumirwa kupati rechitatu